यी हुन् को-रोनाका सबैभन्दा ख-तरनाक ५ लक्षणहरु, जुन देखिना साथ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ ! बेवास्ता नगर्नुहाेला – List Khabar
Home / समाचार / यी हुन् को-रोनाका सबैभन्दा ख-तरनाक ५ लक्षणहरु, जुन देखिना साथ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ ! बेवास्ता नगर्नुहाेला
admin February 4, 2022 समाचार Leaveacomment 124 Views
३) सास फेर्न समस्या:- सासको कमी वा छाती दुख्ने संक्रमणको बढ्दो जोखिमको संकेत हो। को-रोना भाइरस एक श्वासप्रश्वासको संक्रमण हो र यो भाइरसले हाम्रो ‘माथिल्लो भागमा’ स्वस्थ कोशिकालाई आक्रमण गर्दछ । नतिजा स्वरूप, बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ । यसले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउछ । यस्तो भएमा तुरुन्तै डाक्टरको सम्पर्कमा जान सुझाव दिइन्छ ।
Previous २०७८ साल माघ २१ गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल…
Next आनाको ५ देखि १० लाखमै जग्गा पाइने उपत्यकाका यी ठाउँ !